Ny fety mandalo… ny delestazy mitoetra | NewsMada
Ny fety mandalo… ny delestazy mitoetra
Par Taratra sur 27/12/2016
Ny fety mandalo fa ny delestazy eo ihany… Tsy nanova na inona na inona tamin’ny fiainan’ny olona ny fety nandalo teo iny, sy ny mbola ho avy afaka andro vitsy. Lasa tsy miverina intsony ny Krismasy 2016, hivadika 2017 ny taona, fa toa ny eo ihany no ho eo. Raiki-tampisaka, mitoetra efa fiainana andavanandron’ny mponina na eto an-dRenivohitra na any amin’ny faritra any ny delestazy. Iza no tsy mikaikaika, mimenomenona? Na any an-tokantrano, na ny anaty taxi-be, ny eny an-dalana, indrindra fa ny anaty tambajotra sosialy. Amin’ity farany no tena fanamparan’ny olona ny alahelony, hany sehatra fanehoany hevitra sy fanaovany tora-po. Hatramin’ny ompa aza, mety ho ao.
Tsy mahavaha olana akory ny baiko nomen’ny praiminisitra momba ny hanafoanana ny delestazy eto an-tanàna. Ny filoham-pirenena moa, tsy nahenoan-teny mihitsy. Any amin’ny toetr’andro, ny orana tsy milatsaka, izany hoe, any amin-Janahary ny tsiny no miantefa.
Izy ve izany ny nanao ny orana tsy hilatsaka ka mahatonga ny herinaratra tsy ho ampy ary mahatonga ny delestazy?
Ny olona tsy maina, tsy lena, mandrora mitsilany, mitady hanatolahana ny tsiny, fa tsy mahatsapa ny andraikitra raisiny. Iza no manimba ny tontolo iainana? Mamotika ny zavaboahary?
Miara-miasa ny zavatra rehetra ka tsy mahagaga raha tsy mitera-bokatsoa ho an’ny tany ama-monina. Mila mahay fahagagana ny mpitondra anafahana ny olona anaty delestazy. Raha ny fahagagana avy any an-danitra aloha.. tsy hisy mihitsy e!
Raha izany, tsy ny delestazy ihany ny hitoetra maharitra eto fa ny krizy, ny fahantrana, ny adilahy politika, ny tsy fandriampahalemana, ny fako… Ny fety ho vita ihany, ny fety mandalo ihany ary ho hadino vetivety, fa ity resatsika ity, hitohy rahampitso, hitoetra rahampitso mandra-pahatonga ny fety manaraka indray.